Barbados Waxay Noqotay Jamhuuriyad ka madaxbanan boqortoyada Ingiriisk | Entertainment and News Site
Home » News » Barbados Waxay Noqotay Jamhuuriyad ka madaxbanan boqortoyada Ingiriisk
daajis.com:- Barbados ayaa ka ceyrisay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth madaxii dawladeed, iyada oo samaysatay Jamhuuriyad cusub Talaadadii iyada oo madaxwaynihii ugu horreeyay ay jartay xiriirkii gumeysiga ee u dambeeyay ee soo jiray ku dhawaad ​​​​400 sano kadib markii maraakiibtii ugu horreysay ee Ingriiska ay yimaadeen jasiiradda Caribbean-ka.
Amiir Charles, oo imaatinkiisa ay ku farxeen boqollaal qof oo safnaa buundada Chamberlain iyo tiirarka Bridgetown, ayaa jeedin doona khudbad muujinaya saaxiibtinimada sii socota ee labada waddan in kasta oo ay England door muhiim ah ku leedahay ganacsiga transatlantic. ee addoommada.
In kasta oo Ingiriisku addoonsiga u arko dembi hore, haddana qaar ka mid ah Barbadiyaanka ayaa Britain waydiisanaya magdhow.
Dhaqdhaqaaqa David Denny ayaa u dabaaldegay abuurista jamhuuriyadda, laakiin wuxuu sheegay inuu ka soo horjeedo booqashada Amiir Charles, isagoo xusay in qoyska boqortooyada ay qarniyo badan ka faa’iideysteen ganacsiga addoonta.
“Dhaqdhaqaaqayada ayaa sidoo kale jeclaan lahaa in qoyska boqortooyada ay bixiyaan magdhowga,” Denny ayaa ku sheegay wareysi uu ku siiyay Bridgetown.
Ingiriisigu markii hore waxay adeegsadeen shaqaale caddaan ah oo Ingiriis ah si ay uga shaqeeyaan tubaakada, suufka, indigo iyo beeraha sonkorta, laakiin Barbados dhowr iyo toban sano gudahood waxay noqon doontaa bulshada ugu horreysa ee faa’iido doonka ah ee England.
Barbados waxay heshay 600,000 oo Afrikaan ah oo la adoonsaday intii u dhaxaysay 1627 iyo 1833, kuwaas oo la geliyay shaqada beeraleyda sonkorta, iyagoo hanti u helay milkiilayaasha Ingiriiska.
In ka badan 10 milyan oo Afrikaan ah ayaa dalal reer Yurub ah ku xidhxidheen ka ganacsiga addoonta ee Atlantic intii u dhaxaysay qarniyadii 15aad iyo 19aad. Kuwii ka badbaaday safarkii arxan darada ahaa waxay ku danbeeyeen in ay si adag uga shaqeeyaan beeraha.
Barbados waxay ahaan doontaa Jamhuuriyad ka tirsan Barwaaqo-sooranka, oo ay ku jiraan 54 waddan oo ka kala socda Afrika, Aasiya, Ameerika iyo Yurub.
Marka laga reebo xaflada rasmiga ah ee quruxda badan, qaar ka mid ah dadka reer Barbaadi waxay yiraahdeen ma hubin waxa u wareejinta jamhuuriyadda loola jeedo ama sababta ay muhiim u tahay.
“Waa inay ka tagaan boqoradda Elizabeth oo keliya, oo ay uga tagaan madax ahaan. Ma fahmin sababta aan ugu baahanahay inaan noqono jamhuuriyad, “ayuu yiri Sean Williams, 45, oo ku jira hooska taallo madax-bannaani.
Markii ugu dambeysay ee boqoraddan laga qaado xilka madaxnimada waxay ahayd 1992-kii, markaasoo jasiiradda Mauritius, ee ku taal badweynta Hindiya, looga dhawaaqay Jamhuuriyad.